Coronavirus: Muxuu yahay heshiiska ay Culimada iyo maamulka Puntland ka gaareen xiridda Masaajidyada? - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Somali Architecture
Image caption Masjidka Saxaaba ee Magaalada Garowe
Meelaha ugu horreeya ee tooshka lagu iftiimiyay waxaa ka mid ah masaajidyada, oo ah goobaha ay dadka ugu badan si joogto ah isugu imaadaan.
Meelo badan oo ka mid ah dalalka caalamka ayaa masaajidyadii ku yaallay albaabbada la isugu dhuftay.
Kulan ay yeesheen mas'uuliyiinyta Wasaaradda Caddaaladda ee Puntland iyo qaar ka mid ah culimada ku nool halkaas ayaa looga hadlay arrinta ku saabsan xiritaanka masaajidyada.
Hase ahaatee, culimadii shirkaas ka qeyb gashay oo u muuqday inay si weyn uga soo horjeedaan tallaabo noocaas ah ayaa sheegay inay aqbaleen in jadwalka wax laga baddalo, laakiin aan lagu dagdagin xiritaan.
Waxay ku doodeen in xiiligan aan la joogin waqtigii la xiri lahaa masaajidyada deegaannadaas, balse ay hay'adaha dowladda iska kaashanayaan sidii dadka looga wacyigelin lahaa khatartka cudurka Covid-19 ee saf-marka ah.
Image caption Wali ma jiro kiis coronavurus ah oo laga soo tabiyay Puntland
Masaajidyada ugu waaweyn ee laga xiray caalamka waxaa ka mid ah Xarameynka, oo ku yaalla Sacuudiga.
Haseyeeshee, Sheekh Maxamed wuxuu ku adkeystay "in Soomaaliya aan wali laga helin kiisas badan, sidaas darteedna aysan habbooneyn in masjid la xiro".
Dhanka kale wasiirka cadaaladda ee Puntland Cawil Sheekh Xaamud ayaa sharraxaad ka bixiyay waxyaabihii kasoo baxay kulanka ay la qaateen culimada.
Caabuqa Corona, oo lagu magacaabay Covid-19, ayaa dunida ka soo ifbaxay bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay, wuxuuna markii ugu horeysay ka dillaacay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha.
Kiisaska guud ahaan dunida laga xaqiijiyay ayaa gaaraya ilaa 400,000 oo ruux oo uu ku dhacay xanuunkan.
Ku dhawaad 17,000 oo qof ayaa ilaa hadda u dhintay coronavirus.
Inta la ogyahay 100,000 oo qof oo uu ku dhacay cudurkan ayaa ka caafimaaday.